क्वाड बाइक चारपाङ्ग्रे मोटरसाइकलको मज्जा अब नेपालमा पनि – kalikadainik.com
क्वाड बाइक चारपाङ्ग्रे मोटरसाइकलको मज्जा अब नेपालमा पनि
आइतबार, फाल्गुण ०९, २०७७ | १४:२२:३२ |
हेटौँडा । ‘कुन मन्दिरमा जान्छौ यात्री ? कुन मन्दिरमा जाने हो ? कुन सामग्री पूजा गर्ने ? साथ कसोरी लाने हो …..?’
महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाद्वारा रचित तथा रञ्जित गजमेरद्वारा सङ्गीतबद्ध र रविन शर्माको आवाजमा स्वराङ्कन भएर आजभन्दा ३६ वर्ष अगाडिको चर्चित चलचित्र “वासुदेव” मा समावेश गरिएको यो मिठो सङ्गीतमा पशुपति बहुमुखी क्याम्पस मित्रपार्क चाबहिलमा स्नातक तहमा अध्ययनरत सर्लाहीकी स्मीता थापा “टिकटक भिडियो” छायाङ्कन गर्दै हुनुहुन्थ्यो । त्यहाँ उहाँ जस्तै भिडियो बनाउने अरु धेरै थिए तर सबैले यही एउटा मात्र गीतमा भिडियो बनाइरहेका थिए ।
एउटा ढुङ्गेधारा उनीहरुको एकमात्र “सुटिङ स्पट” थियो । धाराको डिलमा बसेर कापी कलम बोकेर केही लेखेजस्तो गरेर फोटो खिच्नेहरु पनि प्रशस्त थिए ।
केहीबेर त्यहाँ बसेर त्यो गतिविधि नियाल्ने जो कोहीलाई पनि त्यो धारा र त्यो गीतसँग पक्कै पनि केही न केही अन्तरसम्बन्ध छ भन्ने कुराको भान परिहाल्छ ।
मनमा पलाएको कौतुहलता मेट्न धारा नजिकै भएको बोर्ड अध्ययन गर्न पनि सकिने रहेछ । बोर्डमा लेखिएको छ, “महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाद्वारा रचित “यात्री” कविताको रचनास्थल ‘गुर्जुधारा’ ।”
नेपालकै ठूलो चरण क्षेत्र रहेको चित्लाङस्थित गुर्जुधारा चौर । महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले यही चौरमा ‘यात्री’ कविता रचना गरेको बताइन्छ । तस्बिरः रिपेश दाहाल/रासस
तीनवटा गजुर भएको ढुङ्गैैढुङ्गाले बनेको पौराणिक शिव मन्दिर पनि यहाँको अर्को आकर्षक गन्तव्य हो । मानन्धरका अनुसार चित्लाङको प्राचीन नाम चित्रापुर हो । उसबेला थानकोटको नाम शोणितपुर थियो । त्यहाँका राजा बाणासुरको पुत्री राजकुमारी उषामैयाको सहेली ‘चित्रा’ ले यहाँको प्राकृतिक सुन्दरतालाइ मन पराएर दैनिक आउने गरेकीले यो ठाउँको नाम चित्रापुर रहन गयो ।
यो घटनाक्रम २२ सय वर्ष अघिको थियो र सोही बखत चारुमतीको सहयोगमा यता चित्रापुरमा पनि एउटा ‘चैत्य’ निर्माण भयो जसलाई अशोक चैत्य भनिन थालियो ।
दक्षिणमा देशकै ठूलो मानव निर्मित ताल इन्द्रसरोवर, पूर्वमा दामन, पालुङ र उत्तरमा काठमाडौंसँग जोडिएको यस क्षेत्र सुन्दरताले भरिपूर्ण छ ।
यहाँ दुईवटा सुविधा सम्पन्न रिसोर्ट र २० वटा होमस्टे सञ्चालित रहेको र हप्तामा ७०० देखि एक हजारसम्मले बास बस्ने गरेको बताउनुहुन्छ चित्लाङ रिसोर्ट प्रालिका सञ्चालक रामशरण नेपाल ।
एशियामा नेपालमा मात्रै पाइने उँटे भेडा (अल्पाका) पनि चित्लाङमा पालिएको छ । रिस उठ्यो भने थुकेर रिस मार्ने यो प्रजातिको ऊन संसारमा सबैभन्दा महङ्गो ऊन हो । यही जनावरलाई हेर्नका लागि मात्रै बर्सेनि यहाँ हजारौँ मानिस आउँछन् । यहाँको अर्को आकर्षण हो, जैतुन खेती । जैतुन स्वास्थ्यवद्र्धक तेलका लागि विश्व प्रसिद्ध छ ।
अत्यन्तै महङ््गो मूल्यमा बिक्री हुने तेल उत्पादन हुने जैतुन वातावरणमा सबैभन्दा अक्सिजन फाल्ने वनस्पती मध्ये पर्दछ । चित्लाङमा विदेशको मरुभूमिमा मात्र देख्न पाइने क्वाड बाइक भनिने चारपाङ्ग्रे मोटरसाइकलको मज्जा पनि लिन सकिन्छ ।
हेटौँडाको भुटनदेवी माध्यमिक विद्यालयकी शिक्षिका कुशुम थापालाई पनि चित्लाङ साह्रै मन पर्यो । सहकर्मीहरुसँग घुम्न आउनुभएकी उहाँलाई जैविक खेती, ऐतिहासिक सातधारा, गुर्जुधारा, चन्द्र दरबार, पौराणिक वस्तुहरु आदिको भ्रमणले आनन्दित बनाएको बताउनुहुन्छ ।
चित्लाङको विकास र पर्यटकीय प्रवद्र्धनमा स्थानीय तथा प्रदेश सरकार लागि परेको थाहानगरका प्रमुख लवशेर विष्ट बताउनुहुन्छ । “हामीले सङ्घीय सरकार तथा प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरेर चित्लाङको विकासका लागि थुप्रै योजना बनाएका छौँ, कतिपय काम भइरहेका छन् कतिपय हुँदैछन्”, उहाँले भन्नुभयो । रासस / रिपेश दाहाल